Ikhabhathi enomtsalane kwiNdalo eBosawas Jungle 2
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMargaux
UMargaux unezimvo eziyi-48 zezinye iindawo.
Ifakwe kwi-Unesco tropical Biosphere Reserve "iMacizo de Peñas Bancas" eBosawas, eNicaragua, kwingingqi yekofu, ikhabhathi enomtsalane yendalo yabucala, enembono entle kunye neendlela zehlathi kuyo yonke ipropathi ewela ifama yethu ye-17 yeehektare eziphilayo, ekhokelela. ezantsi kwingxangxasi yethu yabucala "isiNahuali".
Sine-yoga rancho enye kunye nedesika enye yokucamngca kwingxangxasi. Ilungele usapho okanye abahlobo. Indawo yokuphumla kunye nokunxibelelana nendalo.
Ijikelezwe lihlathi elihle elinemvula, elibekwe ngobuchule ukuba libe bucala.
I-cabin inebhedi ephindwe kabini kunye newele lomntu kwelinye icala, inokwahlulwa kwakhona kwiibhedi ezi-3 ezingatshatanga ukuba ziceliwe (kwakhona kunokwenzeka ukongeza enye ibhedi eyongezelelweyo xa kukho imfuneko ye-$ 8).
Ikhabhinethi inegumbi labo lokuhlambela labucala elinendlu yangasese kunye neshawari eshushu.
Kukwakho nendawo yangaphandle yokuba kwaye ukonwabele iimbono zamawa amhlophe kunye nee-hammocks ezi-2 zokuphumla kuzo.
Thetha nendalo, mamela iiqakamba kunye neentaka ebusuku nasekuseni.
Ijikelezwe yimithi ye-walnut "i-Los Nogales" isityalo esisesichengeni eNicaragua, eyona nto sigxile kuyo kukutyalwa kwakhona kwamahlathi kunye nokuvumela umhlaba ukuba ubuyele ekugawulweni kwamahlathi ngamandla ukuwuguqula ube yintsimi yeketile.
Silima ikofu, iibhanana, iiplantain, imifuno, imithi, amaqunube neentyatyambo. Kukho iindlela ezithandekayo ehlathini lethu, ezikhokelela ezantsi kwingxangxasi yethu enkulu yabucala ebizwa ngokuba yiNahuali kunye neyoga rancho yethu.
Kufuphi ungahamba uhambo oluya kumawa amhlophe kangangeeyure ezingama-4-6-8, tyelela ingxangxasi entle eyi-80 m yemvula yamanzi "la Cascada Arco Iris" okanye uye kukutya kumlimi wasekhaya uDon Chico's comedor.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-5, iibhedi ezikhweleneyo eziyi-2
Abamelwane bethu bahle kakhulu kwaye banoxolo, uninzi lwabo bangabalimi abaya kuthanda ukukukhenketha ukuze bakubonise izilwanyana kunye neentyatyambo ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Margaux